Xonotic: multiplayer uye muchinjika-chikuva yakavhurwa sosi shooter | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi ngatitorei mukana wekutaura nezve mutambo unonakidza pane izvo zvandine chokwadi chekuti vanopfuura mumwe vanozvifarira uye kunyangwe vazhinji vevaverengi veiyi blog vanozoziva, mutambo watichataura nezvazvo nhasi ndiXonotic.
Xonotic iri yemahara uye yakavhurwa sosi yekutanga munhu shooter vhidhiyo mutambo iyo yakagadziriswa seforogo yeNexuiz, Xonotic inyanzvi yemitambo yakawanda yeFPS ine inonakidza mifananidzo uye Gameplay.
Mushure mekukakavadzana kunogadzirwa nemusiyano wemaonero ekuona nekuda kwekuvandudzwa kwemutambo wevhidhiyo wapfuura.
1 Nezve Xonotic
1.1 Xonotic mutambo modes
2 Maitiro ekuisa Xonotic paLinux?
Iye zvino, mutambo unomhanya pasi peiyo yakanyanya kushandurwa vhezheni yeQuake graph injini, inozivikanwa seRimaPlace. Mutambo wayo unofemerwa neiyo Unreal Tournament uye Quake dzakateedzana, asi nezvimwe zvinhu zvinozvisiyanisa.
Mutambo ine nharaunda yakakura yevashandisi yaunogona kutaura nayo uye kugovana zviitiko uye nevamwe mukati mehurukuro yepamutemo yemutambo.
Xonotic iri multiplatform, nekuti zviri pamutemo, mutambo une rutsigiro rweLinux, Windows uye Mac. Iyo sosi kodhi yemutambo wevhidhiyo inogona kubvunzwa, kuchinjwa uye kugoverwa patsva kubva chinotevera chinongedzo.
Xonotic mutambo modes
Mutambo wevhidhiyo ine akasiyana mutambo modes yatinogona kutaura kuti chikuru uye iyo inokwezva nzira yemutambo ndiyo "CTF" ndiko kuti, mureza wechikwata wakakurumbira, mune, sevamwe vazhinji vanopfura, uchafanirwa kutora mureza wechikwata chakapesana ugoenda nacho kumunda wako pasina rimwe timu rinowana rako.
Zvakare imwe yemamodhi modhi ayo iwe unogona kuwana muXonotic ndiyo Deathmatch. Iko kune chaiko mitambo yemitambo gumi nematanhatu muXonotic.
Nzira yekuwana mapoinzi mumutambo ndeyekuuraya vamwe vatambi (vavengi) nerubatsiro rwezvombo zvaunazvo mukuwedzera pakukwanisa kuzadzisa zvimwe zvinangwa.
Iyo Gameplay inomhanya kwazvo, nekuti vatambi vanogona kufamba nekukurumidza uye kusvetuka zvisirizvo.
Nepo pfungwa yekutanga ichifemerwa nemimwe mitambo yerudzi rumwe chete (sekutsvaga nekuchengetedza kudzora kwehutano uye / kana mabhonasi enhumbi, semuenzaniso), kune zvimwe zvinosiyanisa zvinhu.
Iko kusimbisa kuri pakufamba uye mutambo wefizikisi, uchitarisa pakuwana kumhanya, kusvetuka madaro marefu, uye kudzora geometry yematanho.
Mutambo uyu unoratidzira futuristic aesthetic, ine mamepu anoratidza enzvimbo yepamusoro-soro uye nzvimbo. Xonotic inomhanya pasi peiyo DarkPlaces ginjini injini, saka inotsigira kupenya, simba kuvheneka uye shading, offset mepu, uye HDR mifananidzo mhedzisiro.
Maitiro ekuisa Xonotic paLinux?
Iwe unogona kuwana Xonotic mune mamwe mareti ezvinyorwa zvakasiyana zvekuparadzirwa kweLinux, saka kana iwe uchida kuisa iri zita pane yako system unogona kushandisa chero ipi inotevera nzira dzatinogovana pazasi.
Xonotic inowanikwa mune iyo Arch Linux zvinyorwa, saka yeArch Linux, Manjaro, Antergos kana chero chinobva kune vashandisi veArch Linux vanogona kuisa mutambo nemirairo inotevera:
Tinogona kuisa mutambo uyu nerubatsiro rweSnap package, saka isu tinofanirwa kuve nerutsigiro kuti tikwanise kuisa zvinoshandiswa neiyi tekinoroji.
Isu tinongofanirwa kuvhura terminal uye kuitisa mairi:
Kana iwe usingade kuisa Snap apps, iwe unogona kusarudza kushandisa Flatpak, saka yako system inofanirwa kuve nerutsigiro rwayo.
Iwe unogona kushandisa inotevera yekugovana gwara rekuwedzera rutsigiro rwe Flatpak kune yedu system.
Zvekuisa kwako Isu tinongofanirwa kuita mune terminal:
Uye isu tinogona kumhanya nemutambo kuitira kuti tisazowana nzira ipfupi mumenu yekushandisa ne:
Ivo vanogona zvakare kusarudza kurodha pasi mutambo kubva kune yepamutemo mutambo peji, kwavasingade kuisirwa, chete unzip iyo yakadzingwa package uye unomhanya mutambo pane system zvakananga. Iyo yekubatanidza ye kurodha pasi kunotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Xonotic - Mutambi wevazhinji uye muchinjiko-chikuva chakavhurika sosi shooter